चार टिमका यस्ता छन् मुख्य विशेषता «
चार टिमका यस्ता छन् मुख्य विशेषता
रुसमा जारी विश्वकपका सेमिफाइनलका दुई खेल आजबाट सुरु हुँदैछन् । सेमिफाइनको पहिलो खेल आज राति ११ः४५ बजे फ्रान्स र बेल्जियमबीच हुनेछ । दोस्रो खेल भने बुधबार राति ११ः४५ बजे क्रोएसिया र इंग्ल्याण्डबीच हुनेछ । सेमिफाइनल पुगेका सबै टोली यूरोपियन हुन् । चारै टोलीबीच केही समनता र भिन्नता रहेका छन् । यहाँ सेमिफाइनल पुगेका चार टोलीका प्रमुख विशेषताका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
१. फ्रान्सः भर्सटालिटी
डेडिएर डिस्च्याम्पको टोलीलाई यो भन्दा पहिले पत्रकारहरूले आरोप लगाएका थिए कि फ्रान्ससँग धेरै अनुहार छन्, तर कसैको असली पहिचान छैन । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा थियो, तर यही कुराले डिस्च्याम्पको टिमलाई फाइदा गर्यो । समूह चरणका खेलमा फ्रान्सको खेल त्यति उत्कृष्ट थिएन । प्रिक्वार्टरफाइनलमा उसले सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै अर्जेन्टिनालाई हरायो । क्वार्टरफाइनलमा पनि त्यस्तै जबरजस्त खेल्यो र उरुग्वेलाई हरायो । तीन फरक टिम हो त ? होइन टिम एउटै हो तर रणनीति भने फरक ।
फ्रान्सले विपक्षी अनुसारको रणनीति बनाएर खेल्दै आएको छ । यस्तै प्रायः दुर्लभ नै हुन्छ । रणनीति कहिले ४–३–३ को देखियो त कहिले ४–२–३–१ को पनि । डिस्च्याम्पले अलिभियर जुउरुड र केलियन एमबाप्पलेलाई रणनीति अनुसार उपयोग गरेका छन् । विश्वकपका कुनै पनि टिम कमजोर थिएनन् । जर्मनी र स्पेन जस्ता टोलीलाई समेत सामान्य भनिएका टोलीले समस्यामा पारे । बेल्जियमसँगको सेमिफाइनल फ्रान्सका लागि ‘मुस्किल’ मानिएको छ । तर, उक्त खेलमा डिस्च्याम्पको टोली फरक शैलीमा देखिन सक्छ ।
२. बेल्जियमः टिम स्प्रिट
बेल्जियमको टोलीलाई मिडियाले उत्कृष्ट टोलीका रुपमा चित्रित गर्ने गरेका थिए । रसियामा उसले देखाएको सामूहिक खेलले मिडियाको त्यो दावीलाई पुष्टि गर्यो । बेल्जियमको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै टिम स्प्रिट हो । बेल्जियमले जापान र ब्राजिलसँगको खेलमा देखाएको सामूहिकता निकै उत्कृष्ट थियो । ईडेन हर्जाड, केविन डि ब्रुने र रोमेलु लुकाकुबीचको तालमेल गज्जबलाग्दो छ । उनीहरूले आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त रसियामा बेल्जियमका नौ खेलाडीले गोल गरेका छन् । सबैले आफ्नो भूमिका निभाएका छन् । रोबर्टो मर्टिनेजले उपयुक्त समयमा उपयुक्त खेलाडीलाई मैदान पठाएका छन् । बेल्जियमका खेलाडी आफू उत्कृष्ट हुन भन्दा पनि टोलीलाई जिताउने अभियानमा छन् । सबैले मैदानमा टोलीका लागि योगदान गरेका छन् र साथीलाई सहयोग गर्न समेत तयार देखिन्छन् ।
३. इंग्ल्याण्डः भेराइटी
इंग्ल्याण्डलाई एकै विषयमा केन्द्रीत रहेर परिभाषित गर्न निकै मुश्किल हुन्छ । किनकी ग्यारेथ साउथगेटको टोलीले जित हासिल गर्न अलग–अलग तरिका प्रयोग गरिरहेको छ । युवा खेलाडी, आत्मविश्वास, आधुनिक खेलप्रणाली आदि इंग्ल्याण्डका विशेषता हुन् । इंग्ल्याण्ड कुनै पनि खेल र स्थितिका लागि तयार देखिन्छ । कुनै पनि बेला विपक्षी र उसको खेलमा इंग्ल्याण्ड प्रभावी हुने गरेको छ । इंग्ल्याण्ड रसियामा पहिलो पटक टाइब्रेकरमा खेल जितेको छ । गोलकिपर जोर्डन पिकफोर्डले उत्कृष्ट खेलिरहेका छन्, क्याप्टेन ह्यारी केन प्रतियोगिताका सर्वाधिक गोल कर्ता हुन् । २४ वर्षिय उनले ६ गोल गरिसकेका छन् । इंग्ल्याण्ड १९९० यता पहिलो पटक सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । इंग्लयाण्ड रसियामा अर्को एक इतिहास बनाउने अभियानमा छ ।
४. क्रोएसियाः मिडफिल्ड ट्यालेन्ट
रसिया विश्वकपको सबैभन्दा कठिन समूहमा रहेको क्रोएसिया सहजै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्यो । उसले समूह चरणमा अर्जेन्टिना, आइसल्याण्ड र नाइजेरिया जस्ता टोलीविरुद्ध जित निकाल्दै ९ अंक जोडेर समूह अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको थियो । अन्तिम १६ मा डेनमार्क र क्वार्टरफाइनलमा आयोजक रसियालाई हराएको क्रोएसियाले सेमिफाइनलमा इंग्ल्याण्डसँग खेल्नेछ । ज्लाट्को डलिकको टिमको सबैभन्दा बलियो पक्ष मिडफिल्ड हो । क्रोएसियाको मिडफिल्डलाई रसिया विश्वकपको सबैभन्दा उत्कृष्ट मिडफिल्ड हो । लुका मड्रिक र इभान राकिटिक क्रोएसियाका मुख्य हतियार हुन् । रियल मड्रिड र बार्सिलोनाका दुई खेलाडीको तालमेल हेर्न लायक छ । यस्तै इन्टर मिलानका मार्सेलो ब्राजोभिक, रियल मड्रिडका मातेओ कोभासिक, फियोरेन्टिनाका मिलान बडेलज जस्ता खेलाडीले क्रोएसियाको मिडफिल्डलाई बलियो बनाएका छन् ।